Nisy moa ny fampiofanana nomena ireo talen-tsekoly tonga maro teny an-toerana omaly, raha ny fanazavan’ny Mgr Ludovic Rabenatoandro, Vikera jeneralin’ny fisahanana ny fanabeazana eo anivon’ny Diosezy eto Antananarivo, izay nomen’ireo tompon’andraiki-panjakana misahana izany. Tonga teny koa ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny firenena mikambana tamin’ny alalan’ny Unicef nanome fitaovana ary hisy ny toromarika hapetraka isak’ireo sekoly miisa 600 eto Antananarivo. Maro lafy ny fanehoan-kevitra avy amin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra. Tao ireo nankasitraka fa tao koa ireo nitsipaka ary nilaza fa hitory sy tsy hiala amin’ireo tompon’andraikitry ny sekoly, raha sanatria maninomaninona ny zanany. Marihana fa misy ireo sekoly katolika tsy mbola hiverina hianatra anio fa manaraka ny fandaminan’ny fitondram-panjakana.